Tsaramasay : Jiolahy roa maty voatifitra -
AccueilSongandinaTsaramasay : Jiolahy roa maty voatifitra
Tsaramasay : Jiolahy roa maty voatifitra
21/09/2018 admintriatra Songandina 0
Nikononkonona hanao fanafihana mitam-piadiana. Lavon’ ny balan’ny polisin’ny “Unité spécialisée d’Intervention “USI indray ny roalahy tamin’ireo nikasa hanao fanafihana mitam-piadiana. Teny Tsaramasay izy ireo no tratry ny vela-pandriky ny polisy, ny antoandron’ny alarobia 19 septambra lasa teo.
Nahazo loharanom-baovao ny Polisy fa misy miomana hanao fanafihana mitam-piadiana. Fantatra tamin’izany fa hikasa hihazo an’i Diego ireo jiolahy miisa efatra nilanja fitaovam-piadiana mahery vaika toa ny basy sy antsy. Nifampitaona teny amin’ny toerana samihafa ireto farany tamin’io fotoana io no nifanehitra tamin’ireo polisy. Nanao ny fanarahan-dia avy hatrany ny polisin’ny (USI) taorian’ny fampandrenesana avy amin’ireo olona azy. Nihaodihaody teny amin’ny manodidina an’Ankazomanga ireto farany, ka nitohy hatreny Tsaramasay ny fanarahan-dia. Misy amin’izy ireo ny vao avy any Toliara sy Ambovombe no tonga eto an-drenivohitra, raha ny fanazavana voaray. Rehefa nanaraka hatrany ireto olon-dratsy ny Polisy dia niroso tamin’ny fisamborana azy ireo teny Tsaramasay. Nahatsikaritra izany ireo jiolahy, ka nitifitra avy hatrany. Raikitra ny fifanenjehana, ary nitohy tamin’ny fifampitifirana. Niaro tena ny Polisin’ny USI, ka nandritra izany no nahalavo ny roa tamin’ireo jiolahy.
Nahery vaika ny fifanandrinana tamin’izany, satria dia nitifitra ihany ireo jiolahy namany. Taorian’ny fifanenjehana dia azo sambo-belona ny roa ambiny. Mbola tsy fantatra ny mombamomba ireo jiolahy maty, ary heverina fa hitondra fanampim-baovao ny polisy aorian’ny famotorana. Ireto roa voasambotra kosa nentina natao fanadihadiana eny anivon’ny polisy misahana ny ady heloka bevava. Sarona teny amin’ireo maty voatifitra tamin’io fotoana io ireo fitaovam-piadiana mahery vaika toa ny kalaky sy antsy lava iray miaraka amin’ny bala. Araka ny efa fahita moa dia aorian’ny tranga fahatrarana jiolahy tahaka izao vao misy ny fampahafantarana ataon’ny mpitandro filaminana ny tena fitrangan’ny raharaha tahaka izao.
Nisesy ny fahatrarana nataon’ny polisy ireo jiolahy mikasa hanao fanafihana mitam-piadiana teto an-drenivohitra. Talohan’ity ilay telo lavon’ny “Service Anti-Gang” SAG teny Anosibe, izay volaza fa nisy polisin’ny Capsat mpikambana tamin’ireo mpanao fanafihana voatifitra teny an-toerana. Tsy mahagaga raha mirongatra ny fanafihana mitam-piadiana tahaka itony raha ny eto amintsika, satria efa ireo manam-pahefana mihitsy no miray tendro amin’ny jiolahy amin’ny fanatanterahana izany. Toraka izany koa ilay manamboninahitra polisy nitolo-batana nanafika teratany vahiny teny Antsahavola, izay efa nidoboka eny Tsiafahy.
Andry Rajoelina : « Putschiste » kandida